Regedza kuputa utenge Tabex pano. Zviratidzo zvinobudirira uye zvakasikwa
Mutengo Wakatengesa € 36,99 Regular price
Unoda kubvisa kupindwa muropa kwako mumazuva makumi maviri nemashanu chete?
Raira yedu yekutanga Tabex nhasi! Yakagadzirwa muPoland uye yakatumirwa pasirese, kusanganisira USA.
Kune vazhinji vanosvuta pakiti rimwe chete rinofanirwa kukwana kusiya tsika yavo yakaipa.
Kana iwe uchiputa akawanda mapakeji pazuva kana wakamboputa kwemakumi emakore kuraira kwedu kungave kuodha mapakeji maviri uye uteedzere iwo makumi mashanu ezuva rehurongwa panzvimbo pemazuva makumi maviri nerimwe.
Kutakura kwemahara kwepasirese kwemaodha asina kukura kupfuura maviri mapakeji!
Tora rino rinobatsira e-bhuku kana iwe uchiraira!
Iri bhuku richakubatsira iwe kuona manyepo ese pamusoro pefodya yawakave uchitenda mukati memakore ese iwayo ekuputa,
Izvo zvakare zvinokubatsira iwe kugadzirira kwepfungwa uye zvinokupa iwe mamwe anobatsira matipi uye manomano ekuti uite kuburikidza neyakaipisisa chikamu; iro vhiki rekutanga.